Jananinepal.comस्वास्थ/जीवनशैली Archives - Page 17 of 18 - Jananinepal.com
साउन र भदौ महिनामा १४५ जनामा स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण भेटिए !!!
चितवन:- जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा १४५ जनामा स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण भेटिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार ८०२ जनाको रगत परीक्षण गरिएकामा सो सङ्ख्यामा स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण भेटिएको हो । कार्यालयका किट नियन्त्रक राम केसीका अनुसार भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये चितवनका ५०, नवलपरासीका ३७, गोर्खाका २२ र अन्य जिल्लाका ३६ जना […]
गर्भजाँच गराउनेलाई अण्डा निःशुल्क !!!
नागार्जुन:- नागार्जुन–८ को ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवतीलाई नियमित गर्भजाँच गराउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भीमढुङ्गा स्वास्थ्यचौकीले गर्भजाँच गराउनेलाई एक क्रेट अण्डा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गर्भवती स्याहार प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनअन्तर्गत सो व्यवस्था गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो पटक गर्भजाँच गराउनेलाई एक क्रेट अण्डा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । चार पटक गर्भजाँच गराउनेलाई शुरुको […]
आलु खानुको फाईदाहरु के के हुन त एक पटक पढ्नै पर्ने !!!
आलुलाई तरकारीको राजा भनिन्छ। आलुबाट विभिन्न थरी स्वादिला परिकारहरु बनाउन सकिने र जुनसुकै तरकारीमा पनि यसलाई मिसाउन सकिने भएकाले आलु सर्वप्रिय छ ।आलु सबैको भान्छामा नियमित पाक्ने तरकरी हो ।आलु मन नपराउने मानिस कमै होलान् । विश्वको जुनसुकै भेगमा पनि पाइने र अरु तरकारीको तुलनामा सस्तो पनि पर्ने भएकाले धेरैले यसलाई रुचाउँछन् । आलु स्वादमा […]
स्वाइन फ्लु र हङकङ फ्लुका भाइरस फेला !!!
राजविराज:- सप्तरीको कञ्चनरुप र हनुमाननगर कङ्कालनी नगरपालिकामा स्वाइन फ्लु र हङकङ फ्लुका भाइरस फेला परेको छ । ती नगरपालिकामा रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी देखिन थालिएपछि कञ्चनरुपका १८ तथा हनुमाननगर नगरपालिकाका ६ गरी २४ जनामा गरिएको परीक्षणमा एक जनामा स्वाइन फ्लु र १० जनामा हङकङ फ्लु फेला परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख निरञ्जनप्रसाद यादवले बताउनुभयो […]
च्याउमा हामीलाई विभिन्न रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ । तर च्याउ खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि नपुर्याउने च्याउ मात्र खानुपर्छ । साहकारी तरकारीको नाम लिनु पर्दा च्याउ भन्ने बित्तिकै मन नपराउने भन्नेहरु बिरलै होला । यसको स्वाद निकै स्वादिलो हुने भएकाले मानिसहरु च्याउ खान निकै रुचाउने गर्छन् ।च्याउमा पाइने विभिन्न खालका खनिज पदार्थले हाम्रो स्वास्थ्यलाई निकै लाभ दिन्छ । […]
सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संङ्ख्या बढ्दै !!!
इनरुवा:- आइपास नेपाल नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा एक हजार २९३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको आइपास नेपालका मजबुल आलमले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा चार वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या क्रमश ः बढ्दै गएको देखिएको छ । आइपासको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा आव २०७१÷०७२ […]
तोरीको तेलबाट हुने फाईदाहरु जानी राखौ !!!
तोरीको तेल हाम्रो दैनिक जिवनमा प्रयोग भैइहने खाद्य सामाग्री हो । तोरीको तेलमा ६० प्रतिशत मोनोस्याचुरेटेड फ्याट (मुफा), २१ प्रतिशत पोलीअनस्याचुुरेटेड फ्याट (पुफा) र १२ प्रतिशत स्याचुुरेटेड फ्याट पाइन्छ । यी फ्याटी एसिडलाई असल फ्याट भनिन्छ । यी चिप्लो पदार्थ मुटुको धमनकिा भित्तामा गएर बस्न सक्दैन । यसमा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, भिटामिन र मिनरल […]
खराब जीवनशैली बाँझोपनको कारक !!!
संसारमै दिनप्रतिदिन बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको छ । पुरुष होस् वा महिला, दुवै यस्तो समस्याबाट प्रभावित भएका छन् । यसको कारणबारे विभिन्न अनुसन्धान भएका छन् । त्यस्तै, कैयौँ अनुसन्धानले के पुष्टि गरेको छ भने अव्यवस्थित जीवनशैली बाँझोपन समस्याको प्रमुख कारण हो । यी हुन् बाँझोपन बढ्नुका प्रमुख कारण : अत्यधिक मदिरापान लिमिटेसनभन्दा बढी मदिरापानले पुरुषमा […]
फेमिली प्लानिङ कतिवेला गर्ने ??
वैवाहिक जीवनमा बाँधिन चाहने अधिकांश मानिसले बच्चाको चाहना राख्छन् । समाजमा कस्तोसम्म धारणा छ भने बच्चा भएपछि मात्र महिला पूर्ण हुन्छन् । यस्तो धारणा गलत वा सही जे भए पनि बच्चाको आवश्यकतालाई भने देखाउँछ । तर, बच्चा जन्माउँदा भने धेरै कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ । किनकि, बच्चालाई उचित पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रदान गर्नुपर्छ […]